दीपक खनाल ‘र’ बाटै राजनीति बनेको छ । राजनीति नभई कुनै नीति बन्दैन, चल्दैन । यही राजनीति बिग्रँदा मुलुक र मुलुकबासीले अहिलेसम्म उस्तै सास्ती बेहोर्नुपरेको छ । खालि सङक्रमणकालकै नाममा
लकडाउनमै यसरी तानियो रातो मच्छिन्द्रनाथको रथ (फोटो फिचर)
न्युज अफ नेपाल, ललितपुर । वर्षा र सहकालका देवता’ रातो मच्छिन्द्रनाथको रथ सेतो, रातो र पहेँलो पोशाकमा सजिएका मानिसले तानेर ललितपुर महानगरपालिका कार्यालय अगाडि सोह्रखुट्टे पाटी परिसरमा पु-याएका छन् ।
काठमाडौं उपत्यकामा थप १५ दिन लम्बियो निषेधाज्ञा
न्युज अफ नेपाल, काठमाडौँ । काठमाडौं उपत्यकामा निषेधाज्ञा थप १५ दिन लम्बिएको छ । काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरका जिल्ला प्रमुखबीच बसेको बैठकले निषेधाज्ञा जेठ १३ गतेसम्म थप गर्ने निर्णय गरेको
न्युज हफ नेपाल, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसदबाट बहुमत गुमाएका छन् । यससँगै उनी स्वतः पदमुक्त पनि भएका छन् । नेकपा एमालेका १२१ जना सांसद रहेको नेता माधव
दुर्गाप्रसाद शर्मा, पर्वत । कोरोना (कोभिड-१९) संक्रमणको दोस्रो लहरले मुलुक आक्रान्त भएको छ । कपिपय संक्रमितहरुले अस्पताल सम्म पुग्न नपाउँदा घरमै मृत्यु संग संघर्ष गरेर बसिरहेका छन । कतिपयका घरमा
चिरञ्जीवी मास्के, दोलखा । दोलखा स्थित भीमेश्वर मन्दिरको सिलामा बैशाख २५ गते शनिवार झण्डै डेढ घण्टा पसिना आएको छ । भीमेश्वरको सिलामा दाँया पट्टी बाट पसिना आउदा राष्ट्रप्रमुख, बाँया पट्टीबाट
न्युज अफ नेपाल, काठमाडौं । एक दशकभन्दा लामो समयदेखि एसओएस बालग्राम सुर्खेतमा अत्यन्त लगनका साथ ‘आमा’ पदमा रहेर काम गर्दै आएकी एक महिला कर्मचारीलाई सो संस्थाको लागि नेपालका कार्यकारी निर्देशकले
मधुसूदन रायमाझी, काठमाडौं । विश्वव्यापी रुपमा फैलिएको कारोना संक्रमणको दोस्रो लहरका कारण देशभर संक्रमितको संख्या ह्वातै बढ्दा अस्पतालको शय्या भरिएका छन् । ठूलो संख्यामा एकैपटक संक्रमितको दर बढ्दै जाँदा अस्पतालमा
न्युजअफ नेपाल काठमाडौं । आवागमनमा थप कडाई गर्दै काठमाडौं उपत्यकामा आगामी बैशाख २९ गते सम्म निषेधाज्ञा लम्ब्याउने निर्णय गरिएको छ । उपत्यकाका तीन जिल्लाका प्रमुख जिल्लाहरुको मंगलबार बसेको बैठकले सो
न्युज अफ नेपाल, काठमाडौँ । विद्युतीय शव गृहको मेसिन बिग्रिएपछि कोरोना संक्रमितको शव पशुपति आर्यघाटमा जलाइएको छ । कोरोना महामारीका कारण मृतकको संख्या वृद्धि भएकै बेला शव जलाउने विद्युतीय मेसिन
निषेधाज्ञामा देखिएको सुनसान काठमाडौँ (फोटो फिचर)
न्युज अफ नेपाल, काठमाडौँ । कोरोना संक्रमणको दोस्रो लहर फैलिएसँगै विभिन्न जिल्लामा निषेधाज्ञा लागू गरिएको छ । विश्वभर फैलिएको कोरोनाको दोस्रो लहरका कारण नेपालमा मात्रै सयौँको मृत्यु भइसकेको छ ।
न्युज अफ नेपाल, काठमाडौं । कोरोना महामारीकोे संक्रमण नेपालमा पनि दैनिक रुपमा नयाँ रेकर्ड राख्दै अघि बढिरहेको छ । छिमेकी राष्ट्र भारतमा कोरोनाको दोस्रो लहरले झनै भयावह रुप लिइरहेको छ
राजधानीमा निषेधाज्ञाको आज तेस्रो दिन (फोटो फिचर)
न्युज अफ नेपाल, काठमाडौं । राजधानीमा निषेधाज्ञा लागू भएको आज तेस्रो दिन । कोरोना संक्रमणको बृद्धिदर तीव्र भएपछि सरकारले राजधानी लगायतका २३ जिल्लामा निषेधाज्ञा लागू गरेको छ । शनिबार निषेधाज्ञा
निजी क्षेत्रको स्वास्थ्य सेवा महँगो र सरकारी स्वास्थ्य सेवा प्रभावकारी हुन नसकेको आम गुनासोबीच शहीद गंगालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्रले तुलनात्मकरुपमा गुणस्तरीय र प्रभावकारी सेवा उपलब्ध गराउँदै आफ्नो फरक पहिचान बनाउँदै
– डा. रामदेव पण्डित (आयुर्वेद चिकित्सक) बेला–बेलामा राजधानी काठमाडौं र देशका अन्य स्थानहरुमा पनि वायु प्रदूषण ह्वात्तै बढेर समस्या सिर्जना हुने गरेको छ । गत चैत्र महिनामा दुई हप्ताभन्दा बढी
न्यून रक्तचाप : के यो समस्या हो ?
– प्रा. डा. प्रकाशराज रेग्मी (मुटुरोग विशेषज्ञ) पछिल्लो समय, न्यून अथवा कम रक्तचापबारे जिज्ञासा बढेको देखिन्छ । भलै यसलाई उच्च रक्तचापजस्तो गम्भीररुपमा भने लिएको पाइँदैन । चिकित्सकहरुले पनि कम रक्तचापभन्दा
ओलीसँग भेटेपछि माधव नेपालले भने, ‘ब्याक टु मंगलमान !’
न्युज अफ नेपाल, काठमाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालबीच को भेटवार्ता सम्पन्न भएका छ। डेढ महिना लामो सम्वादहीनता तोडेर बुधबार दुई नेताबीच कुराकानी